Fivoahana voalohany momba ny HTC 11 | Vaovao momba ny gadget
Fivoahana voalohany momba ny HTC 11
HTC dia orinasa efa an-tsena an-telefaona nandritra ny taona maro ary raha manana taona vitsivitsy ianao, azo antoka fa nampiasa ny iray amin'ireo PDA miaraka amin'ny Windows Mobile (HTC Diamond) navoakan'ny orinasa talohan'ny nahatongavan'ireo terminal voalohany niaraka tamin'ny Android , toy ny Magic and Hero. Tao anatin'izay taona faramparany dia tsy nanam-bintana firy tamin'ireo terminal farany avoakany ny mpanamboatra Taiwanese, afa-tsy tamin'ity taona ity, izay nandefasana terminal boribory na aiza na aiza, fa na ny vidiny lafo na ny laza noforonina dia tsy namela ny orinasa hiditra amin'ny varotra ambony amin'ireo terminal farany avo lenta miaraka amin'ny HTC 10.
Ny orinasa dia niasa nandritra ny fotoana fohy tamin'ny mpandimby voajanahary an'ny HTC 10, terminal iray izay hanaraka ny isa ary ho HTC 11 ary raha toa ka tsy mahavita hafainganam-pandeha ny orinasa amin'ny vidiny, dia mety ho fanoloana tena tsara ho an'ny fiafarana mahazatra. Ny fivoahana voalohany momba ity fitaovana ity dia avy amin'ny tambajotra sosialy sinoa Weibo. Satria afaka mamaky ny HTC 11 isika dia hampiditra efijery 5,5-inch miaraka amin'ny vahaolana QHD 2.560 x 1.440 ary toy ny ankamaroan'ny terminal izay aseho, dia hanana ny efijery miolaka izy, toa ny Samsung Galaxy S7 Edge.
Mikasika ny fakantsary, HTC dia hametraka fakantsary 12 mpx, ny vahaolana mitovy amin'ny ampiasain'ny mpanamboatra azy ihany, izay misy kalitao fa tsy ny haben'ny sary. Inona koa ny fakan-tsary any aoriana dia mety hampiditra stabilizer sary optika. Ny fakan-tsary eo anoloana dia ho 8 mpx ho an'ny selfie sy antso an-tsary. Ny baterian'ny HTC 11 vaovao dia hahatratra 4.000 mAh, izay amaritan'ny mpanamboatra fa azontsika atao ny mametraka ny fatin'ilay fitaovana ary tonga mangina amin'ny alina isika hitaky izany. Ity terminal ity dia hampiditra fanamarinana IP67 hiarovana azy amin'ny rano sy ny vovoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fivoahana voalohany momba ny HTC 11
Mivoaka ny famaritana Moto M
WhatsApp 'Status', kopia vaovao iray ho an'ny Snapchat